Fuchsia OS RC kii ugu horreeyay ayaa la sii daayay toddobaadyo ka hor dad badana ayaa ogaaday | Laga soo bilaabo Linux
ka horumariyayaashu waxay sugayeen oo si xiiso leh u sugayeen sii deynta rasmiga ah ee nidaamka hawlgalka Fuchsia in Google ayaa horumarineysa, laakiin dhab ahaan, shirkadda ayaa si dirqi ah u qiratay jiritaankeeda Ilaa hadda.
Macnaha halkan Google waa inay ku ilaalisaa horumarka sida ugu macquulsan ee nidaamkan qalliinka xoogaa shaqeeyay. Maaddaama dhowr toddobaad ka hor RC kii ugu horreeyay la sii daayay "Nooca Musharaxa".
Iyadoo loo marayo saldhigga Fuchsia, horumariyayaashu waxay arkeen laan la yiraahdo "Siidaynta / 20190206_00_RC01".
Magacan, waxaan u qaadan karnaa in Google ay abuurtay "sii deyn musharax" Febraayo 6, oo u muuqata in loola jeedo "Siidaynta Musharax 01", inkasta oo aynaan hubin waxa labada nambar dhexe ee 00 loola jeedo.
1 Ku saabsan Fuchsia OS
1.1 Maxay nuqulkan loogu magac daray RC halkii loo isticmaali lahaa alfa ama beta?
1.2 Hordhac aan qarsoodi laheen
Ku saabsan Fuchsia OS
Ilaa hadda waxa laga ogyahay Fuchsia OS waa tan waa nidaam shaqeynaya waqtiga dhabta ah (RTOS) iyadoo awoodaha amniga ku saleysan ay hadda horumarinayso Google.
Taasna illaa iyo hadda waxaa loo hayaa sida ugu hooseeya ee suurtogalka ah. Sidoo kale, si ka duwan Chrome OS iyo Android (nidaamyada sidoo kale ay soo saartay Google) kuwani waxay ku saleysan yihiin Linux Kernel.
Laakiin maaha Fuchsia, tan tan waxay ku saleysan tahay microkernel cusub oo loo yaqaan «Zircon», oo laga soo qaatay «Little Kernel», Nidaam hawlgal oo yar oo loogu talagalay nidaamyada gundhigga.
Fuchsia, in kasta oo ay isku dayeyso inay ahaato mid caqli-gal ah, koodhkeeda waxaa loo qaybiyaa bilaash oo bilaash ah softiweer hoostiisa iyadoo la raacayo liisanka barnaamijyada, oo ay ku jiraan qodobka BSD 3, MIT iyo Apache 2.0.
Maxay nuqulkan loogu magac daray RC halkii loo isticmaali lahaa alfa ama beta?
Guud ahaan, marka loo eego habka horumarinta warshadaha softiweerka,versions Noocyada sii deynta Musharaxa (RC) waxay u muuqdaan inay yihiin wajigii ugu dambeeyay ee imtixaanka ka hor inta aan software-ka la sii deyn.
Laakiin kiiska nidaamka qalliinka sida “Fuchsia”Jiritaanka barnaamijka xitaa lama aqoonsan, ma jirto wax muujinaya in tijaabooyinka noocan ah la dhammaystiray (Ilaa hadda).
Fuchsia OS weli waa nidaam hawlgal xilli hore. Dhowr bilood uun ka hor, Fuchsia xitaa waxay qortay UI, taasi waa, waxaa kaliya lagu dabaqay horumariyeyaasha, maahan isticmaaleyaasha ugu dambeeya, taas oo guud ahaan loo tixgelin doono musharraxa sii deynta inuu aad uga duwan yahay.
Laakiin qaybta kale ee qiimaha ayaa ah taas waxaan horeyba u ognahay in Google ay leedahay keyd gaar ah oo Fuchsia ah oo lagu keydiyo koodhka laga bilaabo barnaamijyada macaamiisha sida YouTube, halkaas oo nooc duug ah oo ka mid ah is-dhexgalka adeegsadaha badan la qarin karo. .
Suurtagalnimada kale ayaa ah in kooxda Fuchsia ay kaliya tijaabineyso awooddooda ay ku abuuri karto sii deyn, ma ahan waxa ay "daabacayaan".
Hordhac aan qarsoodi laheen
Isagoo u maleynaya in tani dhab ahaantii tahay Fuchsia Musharraxii ugu horreeyay ee sii deynta sharaxaadda ugu fudud ayaa ah in loogu talagalay gudaha oo keliya.
Haddii ay arintu sidan tahay, wali waa ugu yaraan guul muhiim ah horumarka Fuchsia. In kasta oo ay adag tahay in la aamino in Google ay wali isku dayi karto inay ka dhigto waxyaabaha ku jira sii deynta musharraxa mid ay heli karaan dadweynaha.
Laakiin qoraalka ayaa muujinaya in laba maalmood ka dib (Febraayo 8), laba isbeddel koodh lagu daray laanta suurta galnimada sii deynta Fuchsia "Musharaxa Siidaynta".
Labadan isbadal waxay umuuqdaan kuwo laxiriira hagaajinta khaladaadka shabakada ee muhiimka ah ee mararka qaar kahortaga aalada inay gebi ahaanba bilaaban.
Sabab kasta ha noqotee, Google waxay dooneysaa inay ku siiso xalalkan muhiimka ah musharraxa sii-deynta, taas oo ka badan hal mar oo tijaabo ah.
Tan iyo markii la ogaaday, kooxaha Fuchsia iyo Android Waxay ka shaqeynayeen sidii Fuchsia ay ugu shaqeyn lahayd emulator-ka rasmiga ah ee Studio 'Android Studio'.
Waxaa laga yaabaa google diyaarin kara nooc Fuchsia loo qaabeeyey gaar ahaan jilitaanka, u oggolaanaya horumariyayaashu waxay bilaabayaan inay soo saaraan codsiyada nidaamka hawlgal ganacsi.
Maadaama laga yaabo inaad diyaar garoobeyso inaad wax walba diyaariso kahor imaatinka dadweynaha guud, wax qaali ku noqday geerida nidaamyo badan oo mobilada ka hawlgala tan iyo markii aan la helin codsiyo la siinayo adeegsadaha waxaa lagu xukumay inay xarigga u dhigaan qoortooda
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Fuchsia OS RC kii ugu horreeyay ayaa la sii daayay toddobaadyo ka hor oo in yar ayaa dareemay
Jawaab Juan Valdéz